एमाले कम्यूनिष्ट पार्टी हो जस्तो लाग्दैन | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » एमाले कम्यूनिष्ट पार्टी हो जस्तो लाग्दैन
एमाले कम्यूनिष्ट पार्टी हो जस्तो लाग्दैन
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य रेवन्त झा, जो नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको विश्वास पात्र भएर लामो समयदेखि एमाले नेताको हैसियतले रौतहटमा एकछत्र राज गरिरहँदा एमाले संघीयता, पहिचान र मधेश विरोधी रहेको आरोप लगाउँदै एक वर्षअघि एमाले परित्याग गरि फोरम नेपाल प्रवेश गरे । प्रस्तुत छ, पहिचानवादी नेता झासँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ।
–केन्द्रीय सदस्य, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल
लामो आन्दोलनको विश्रामपछि मधेशको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
—मधेश अझै आन्दोलनमै छ । धुँवा निस्किरहेको रहेको छ, जुनबेला पनि आगो बल्न सक्छ । यसरी भनौं, अहिले पनि मधेश आन्दोलनको रापताप मधेशमा कायमै छ । आन्दोलनका लागि मधेश तयार छ । मधेशमा अहिले शक्ति सञ्चय भइरहेको छ । ६ महिनासम्म आन्दोलन हुँदा पनि मधेशी जनता न्यायको पखाईमा थियो र अहिले पनि न्यायको प्रतिक्षामा छ । हुन त सुशिल कोइराला सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा आन्दोलन शुरु भएको थियो तर मधेशी जनता जति एमाले र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि क्रुद्ध भए त्यति काँग्रेस अर्थात सो दलमा तत्कालिन सभापति सुशिल कोइरालामाथि भएन किनभने एमाले सरकारमा भएपनि नभएपनि मधेशमाथि निरकुँशशैलीमा प्रस्तुत भए आज त्यसैको नतिजा मधेश एमाले मुक्त हुँदैछ । एमालेको ओली सरकार ढलेर बनेको प्रचण्ड सरकारबाट मधेशलाई धेरै ठूलो अपेक्षा छ । किनकि, ओली सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगाउँदा बखत नै प्रचण्डले मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो । प्रतिवद्धता अनुसार प्रचण्ड सरकारले. संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ त्यो स्वागतयोग्य तर त्यो पूर्ण छैन । संविधान जारी गर्दाखेरी जसरी प्रमुख तीन मिलेर गीता, बाइबल, पुराण जस्तो यसमा एउटा कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन हुँदैन । संविधानमा सबैको अधिकार समेटिएको छ, केही छुटाइएकै छैन । सबैको अधिकार सुरक्षित छ, भनेर जुन अफवाह फैलाइएको थियो । त्यो भ्रम अहिले चीरिएको छ ।
संशोधन प्रस्ताव आइसकेको छ तैपनि तपाईहरुले आन्दोलनको धम्की दिइरहनु भएको छ किन ?
–मैले अघि नै भने कि मधेशवादी दलको दवावमा संशोधन प्रस्ताव आएको हो तर भएका तीन बुँदे सम्झौता अनुसार आएको छैन । त्यसलै हामी त्यसको विरोध गरिरहेका छौ । हामीले भनिरहेका छौ, तिमीहरुले ल्याएका प्रस्ताव ल्याएको ठिक हो तर त्यो पूर्ण छैन, परिमार्जनसहित त्यसलाई पास गर । तर जस्ताको त्यस्तै पास गर्यो भने भोलि आन्दोलनको स्वरुप के हुन सक्छ, अहिले नै भन्न सकिन्न तर, मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले त्यसको निर्णय गर्छ र त्यो विगतको भन्दा भयकंर आन्दोलन हुन्छ । अबको आन्दोलनको बेग्लै रापताप हुन्छ । कम क्षति र अधिकतम उपलब्धिमा आन्दोलन केन्द्रीत हुनेछ । काठमाडौमा अनुमान र हल्लाको भरका विचार प्रवाह हुन्छ । यहाँका मिडियाहरु यथार्थ नबुझि भ्रम फैलाउने काम गर्छन् । देशको यथार्थ चित्र केन्द्रीय मिडियाले बुझेकै छैनन् । यसरी जनतामा भ्रम सिर्जना हुनु स्वभाविक हो । एमालेले लुम्बिनी क्षेत्र आपसास आन्दोलन गर्दा य मिडियाले प्राथमिकताका साथ समाचार प्रवाह गर्यो तर मधेशमा महिनौंसम्म आन्दोलन गर्दा त्यतातिर ध्यान गएन । समाचार दिएपनि त्यसलाई बंग्याएर दिन्थ्यो ।
एमालेले गरेको त्यो आन्दोलनलाई मधेशी जनताले कसरी लिएको छ ?
–संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध एमालेले प्रायोजित रुपमा आन्दोलन गरिरहेको छ । यो आन्दोलनलाई मधेशी जनताले आफू विरुद्धको आन्दोलन हो भनि बुझेका छन् । मधेशी जनताको अधिकार सविधान संशोधनमार्फत पूरा हुँदैछ, तर एमालेले त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेको छ, त्यसलाई हामी के बुझ्ने, मधेशी जनताले के बुझ्ने । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई अहिले पनि के ह्याङ ओभर छ भने अहिले पनि सत्तामै छु, सरकार मैले नै चलाइरहेको, जे मन लाग्छ त्यही गर्छु भनि ठानिरहेका छन् । उसलाई सत्ताको भूतले अझै छाडेको छैन । एमाले त्यसमै रमाइरहेको छ । एमालेले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नै सकेको छैन । समय कालखण्ड अनुसार समाज, देश र विश्वमा परिवर्तन हुन्छ त्यो अनिवार्य छ, परिवर्तन कसैले छेकेर छेकिन्न । यो यथार्थ एमालेले बुझ्न सकेन । जमेको इनारको पानी जस्तै भयो एमाले ।
एमालेले यस्तो किन गरेको होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–एमाले अरु पार्टीभन्दा आफूलाई छुट्टै देखाउने होडबाजीमा छ । एमाले कम्युष्टि पार्टी हो, तर व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो छ । कम्युनिष्ट पार्टीले त उत्पीडित समुदायलाई अधिकार दिने कुरा गर्छ । तर, एमालेले भएको अधिकार पनि खोस्दैछ त्यो कस्तो कम्यूनिष्ट हो । त्यो दल र व्यक्ति मात्रै कम्युष्टि हुन सक्छ, जो शोषित पीडितको पक्षमा आवाज उठाउँछ । शोषित पीडितको माग पूरा गराउन पहल गर्छ । तर, एमालेले कम्युनिष्टको सिद्धान्तलाई ताखमा राखेर नश्लीय उन्मादमा लागेको छ । यसले भविष्यमा एमालेलाई ठूलो घाटा हुन्छ । नश्लीय उन्मादको मातमा एमालेले आफ्नो अन्धकार भविष्य देख्नै सकेको छैन । एमालेको त्यही नश्लवादी उन्मादले गर्दा मुलुक गृहयुद्धमा फस्ने खतरा बढेको छ । तर, शोषित पीडत समुदाय एक हुँदैछन् । शोषित वर्ग संगठित हुँदैछन् । त्यो शक्ति उदाउने बित्तिकै एमालेको घमण्ड चकनाचूर हुन्छ । भोलि एमाले पार्टी भनेको विष्णु मानन्धरको जस्तो पार्टी भएर सीमित हुन पुग्छ, हेर्दै जानु होला ।
तपाई यस्तो भन्नुहुन्छ, भोली चुनाव भयो भने त्यही मधेशीहरु एमालेलाई नै मतदान गर्न पुग्छ किन हुन्छ त्यस्तो ?
–तपाईले भनेको सही हो । आन्दोलनको बेला सँगै आन्दोलन गर्छन् । एमाले, काँग्रेस र माओवादीको विरुद्धमा नारा लगाउँछन् तर मतदान तिनै दलहरुलाई गर्छन् यो बिडम्बना हो । मेरो विचारमा यसको मुख्य कारण, सत्ता स्वार्थ हो । सत्ता, पद र कुर्सीका टासिरहने गलत प्रवृत्तिले गर्दा यस्तो भएको हो । सत्ताको नजिक जो पनि जान चाहन्छन् । र, चनावको बेला सत्ता र कुर्सीलाई ती दलहरुले राम्रोसँग दुरुपयोग गरेका हुन्छन् । सत्ता र पद हुँदासम्म त्यसमै रमाउने र त्यो नपाएपछि विकल्प खोज्ने चरित्र मधेशमा व्यापक छ । आन्तरिक रुपमा हामीसँग कुरा हुँदा, एमालेकै सांसद्हरुले एमालेको नीति गलत छ, प्रवृत्ति गलत छ, एमालेको भविष्य छैन भन्छन् । काँग्रेस माओवादीमा रहेका मधेशी सांसद वा नेताहरुको गुनासो पनि यस्तै छ । तर, सार्वजनिक ठाउँमा उनीहरु बोल्न सक्दैनन् । खुलेर बोल्न वा छोड्न नसक्ने बाध्यता सुनाउँछन् । छाडे भने पद गुम्छ भन्छन् । सत्ताबाट सडकमा पुग्ने बाध्यता छ भन्छन् । चुनावमा करोडौ खर्च गरेर आएका छौं, त्यो पैसा गुम्छ भन्दैछन् । तर, आन्दोलन, संविधान संशोधन, निकास र मधेशी जनजातिको हकमा एमाले गलत छ, एमाले नेताहरुको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेबार छन्, यो कुरा एमालेमा रहेका मधेशी सांसद् र नेताहरुको आत्माले स्वीकारेको छ ।
तपाईको विचारमा एमालेले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
–समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा विश्व अघि बढिरहेको बेला एमालले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । संसद्मा एमाले आफै ठूलो पार्टी भएर बसेछ । उनले आन्दोलन किन गर्नु पर्यो ? उसले संसद्को सामना गर्नु पथ्र्यो । एमालेले संसद् अवरोध गरेर सडकमा ताण्डव गरेको सुहाउँदैन । संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहित विपरीत नै छ, भने एमालेले संसद्मा भोटिङ गराओस् । बरु मधेशी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायलाई समस्या छ । संसद्मा उनीहरुको उपस्थिति कमजोर छ । सडकमा जानु बाहेक मधेशी जनजातिसँग अर्को विकल्प छैन । एमालेलाई त त्यो समस्या छैन । अनि किन संसद्बाट एमाले भाग्दैछ ?
लौ तपाईहरुले भनेको जस्तो संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित नभए के हुन्छ ?
–मैले अघिदेखि पटक पटक भन्दै आएको छु कि हामीले भनेको जस्तो यदि प्रस्ताव नआए त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्छौ र त्यो आन्दोलन थेग्न सक्दैन । एमालेको कारण दुई तिहाई मत नपुगेर संशोधन फेल भयो भने त्यसको प्रतिक्रिया बेग्लै हुन्छ । तर, भोटिङमा नजाँदै सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लियो भने त्यसको प्रभाव अर्कै हुन्छ । एमालेले प्रस्ताव विफल बनायो भने एमाले झनै नाङिगन्छ । एमालेप्रति उत्पीडित समुदायको रवैया झनै नकारात्मक हुन्छ । एमालेको दबाबले सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिइदियो भने प्रमुख तीन दल मिलेका छन् भन्ने जनतामा सन्देश जान्छ । संविधान जारी गर्दा जसरी तीन दल मिलेका थिए, त्यसरी नै संविधान संशोधनलाई तुहाए भन्ने अर्थ लाग्नेछ । प्रस्ताव पेश गर्ने अनि अर्काको दबाबले फिर्ता लिएर दलहरुले नाटक गरे भन्ने अर्थ लाग्नेछ । संशोधन भएन भने हामी फेरि आन्दोलनमा होमिन्छौं ।
मधेशी जनता आन्दोलनको मुडमा छैन जस्तो लाग्छ त ?
–तपाईको अनुमान गलत छ । मरता क्या नही करता, मधेशको अवस्था अहिले त्यस्तै छ । राज्यको दमन र शोषणले जनता यसै मरिरहेछ । अधिकारबिहीन भएर मर्नुभन्दा अधिकार प्रप्तिका लागि संघर्ष गर्दै मर्नु बेस । यो यथार्थ मधेशको कटु पीडा हो । आन्दोलन घोषणा गर्ने बित्तिकै जनता ह्वारह्वार्ती सडकमा आउँछन् भन्ने छैन । बिस्तारै हुन्छ । हिजो पनि क्रमशः आन्दोलन उठेको थियो । आन्दोलनलाई चरणबद्ध रुपमा अगाडि बढाउँछौं । मधेशमा जनताको मूड मैले देखे अनुसार, जनताका आन्दोलनका लागि तयार छन्, अधिकारको लागि आन्दोलन गर्नु परे गर्छौंै, सहीद हुनु परे हुन्छौं । तर, अधिकार पाउनु पर्यो बस ।
लामो आन्दोलनले गर्दा मधेशको अर्थतन्त्र चौपट भइसकेको थियो, अहिले कस्तो छ ?
-विश्व स्तरको ऐतिहासिक आन्दोलनले मधेशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएकै हो । त्यहाँको जनजीवन चौपट भइसकेको थियो । त्यो बिस्तारै सामान्य हुँदैछ । जति दुःख र कष्ट भोगे पनि मधेशी जनतालाई प्रष्ट थाहा छ, संविधानमा आफ्नो र भावी पुस्ताको अधिकार जसरी भएपनि सुनिश्चित गराउनु छ ।